एक्लै एयर्पोर्ट अगाडि गएर बिरोध गर्छु भन्दै रेखा थापाले बोलिन् परदेशिएका नेपालीहरुको पक्षमा! – PathivaraOnline
Home > समाचार > एक्लै एयर्पोर्ट अगाडि गएर बिरोध गर्छु भन्दै रेखा थापाले बोलिन् परदेशिएका नेपालीहरुको पक्षमा!
एक्लै एयर्पोर्ट अगाडि गएर बिरोध गर्छु भन्दै रेखा थापाले बोलिन् परदेशिएका नेपालीहरुको पक्षमा!
प्रचन्डकि प्यारी नायिका रेखा थापाले नेकपा सरकारको कडा बिरोध गरेकी छिन। आफु अरबौका सुबिधा लिने राज्य कोष खाएर बस्ने अनि मजदुरको झोला खोस्ने ? सरकार पछिल्लो समय विदेशबाट हवाइ यात्रुले ल्याउने सामानमा कडाइ गर्न एक्सनमा उत्रेको छ । धेरै समय अगाडि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका मालवस्तुमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा भन्सार महसुल छुट दिन सक्ने प्रावधानको कार्यान्वयनमा सरकार उत्रेको हो ।
यसैबिच नायिका सामाजिक सञ्जालमा नायिका रेखा थापाले एक स्ट्याटस लेख्दै सरकारी यस्तो कदमको विरोध जनाएकि छन् । उनले लेखेकि छन्, ‘जाने बेला रुदै र फर्कने बेला पनि रुवाउने सरकारका यस्ता श्रमिकमारा कदम बिरुद्दको आवाज उठाउनु पर्छ। हाम्रा श्रमिक दाइभाइ यो देशका गौरब हुन र उनिहरुको असम्मान गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यो बन्द गरिएन भने म एल्लो किन नहोस् एयर्पोर्ट अगाडि बिरोध गर्न जान तयार छु।’
दु:खद खबर: पावरहाउसमै ३ वटा बम विस्फोट गराएछि
भर्खरै कुवेतबाट आयो १४ नेपालीको यस्तो रुवाउने खबर – पुरा हेरेर शेयर गर्नुहोस
रुवाउने भिडियो: अभागी छोरी, जस्ले बुवाको माया कहिल्यै पाईनन, श्रीमान खोजिदिन सन्तोष जादै (भिडियो हेर्नुस्)